विषादीको पञ्जामा बजार: तरकारीमा गर्भवतीको औषधि, बच्ने कसरी ? « News24 : Premium News Channel
विषादीको पञ्जामा बजार: तरकारीमा गर्भवतीको औषधि, बच्ने कसरी ?
जेनेटिक इन्जिनिएरिङको मद्दतले प्रयोगशालामा उत्पादित फलफूल, तरकारी तथा अन्नबालीलाई ‘जेनेटिकल्ली मोडिफाइड फुड’ (जीएम फड) भनिन्छ । पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा यस प्रकारको कृत्रिम प्रक्रियाद्वारा तयार खानाको प्रयोग बढिरहेको छ । कुनै पनि खाद्यान्न बालीको उत्पादकत्व बढाउन, कीट तथा जीवाणु प्रतिरोधी बनाउन तथा प्रतिकूल वातावरणमा पनि हुर्कन सक्ने बनाउनका लागि वैज्ञानिकहरूद्वारा माटोमा पाइने सूक्ष्म जीवाणु (ब्याक्टेरिया) को जीनलाई उक्त बालीको बीजमा अत्याधुनिक पद्धतिद्वारा प्रत्यारोपण गरी यस प्रकारका प्रयोगशालामा उत्पादन गरिन्छ ।
‘जीएम’ प्रविधिद्वारा उत्पादित फलफूल तथा तरकारी हेर्दामा भने आकर्षक, चिल्ला, ठूलठूला, उज्याला रङका हुने गर्दछन् । यस्ता बालीहरू लामो समयसम्म लगाउनाले यसमा भएको हानिकारक तत्वको नकारात्मक प्रभावले माटोको संरचना नै परिवर्तन गरी माटोमा पाइने फाइदाजनक ब्याक्टेरियाजस्ता सूक्ष्म जीवाणुलाई नष्ट गर्दछन् । यस प्रकारका ‘जीएम’ बालीको बीजमा नै ब्याक्टेरियामा पाइने कीटनाशक जीन प्रत्यारोपण गरिएको हुन्छ ।
यस्ता बीजबाट उम्रिएका खाद्यान्नका (जस्तो बिटी कर्न नामक मकै ) प्रत्येक कोषिकामा मानिसका लागि हानिकारक विषादी प्रचुर मात्रामा पाइन्छ जसलाई कुनै पनि प्रक्रियाद्वारा हटाउन सकिँदैन । यस्ता विषादीले एलर्जी, दमरोग तथा क्यान्सरसमेत निम्त्याउन सक्छन् । हानिकारक रसायन र प्लास्टिकको प्रयोग गरी नक्कली दूध, नक्कली अण्डा, नक्कली नुडल्स, नक्कली मासु, नक्कली बन्दा गोभी र नक्कली चामलसमेत तयार गरेको समाचार बेलाबखतमा आउने गर्दछ ।